MD Farmaajo Doorasho xor & Xalaal ah mar labaad madaxweyne maku noqon karaa? - Banaadisom
Home Wararka Maanta MD Farmaajo Doorasho xor & Xalaal ah mar labaad madaxweyne maku noqon...
MD Farmaajo Doorasho xor & Xalaal ah mar labaad madaxweyne maku noqon karaa?
Maanta oo kale 27-kii December 2017kii ayaa la dhaariyay xildhibaanada goleyaasha Baarlamaanka, waxaana maanta ku eg muddo xilleedkooda.
Xildhibaan Mahad Salaad ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo 40-cisho kaliya u hartay,islamarkaana aysan muuqan doorasho la isla ogol yahay iyo daruuftii lagu qaban lahaa.
Sidoo kale, wuxuu hoosta ka xariiqay xildhibaanada in madaxweynaha uu yaqiinsaday doorasho xor iyo xalaal ah in uusan madaxweyne mar labaad ku noqoneyn.
Halkaan Hoose ka Akhriso Qoraalka Xildhibaanka:-
Maanta ayay ku egtahay muddo xileedka Goleyaasha Barlamaanka. Duqa Farmaajo ahna 40 cisho ayaa ka hartay muddo xileedkiisa. Doorasho la isla ogolyahay iyo daruuftii lagu qaban lahaa ilaa hada midna nooma muuqato.
Lama yaabani Farmaajo oo waa nin garasho siyaasadeed ka arradan, guulwadeyaal sii luminayana ay hareerahiisa buuxaan. Lkn waxan waydiin lahaa NACAMLEYAASHA HAWIYE EE HAREERIHIISA DHOOBAN, ma sidaan ayay dan moodeen mise marka Farmaajo dalka iyo dadka dagaal geliyo, diyaaradna ka raaco ayay rakaabka diyaaradiisa kamid noqon doonaan?! 5fe88d188aebc